Flim2MM: Kubo and the Two Strings (2016)
လဘုရင်ကြီးတွေ့မှာစိုးလို့ ညဘက်ဆို အပြင်ထွက်လို့မရတဲ့ Kuboဟာ တစ်နေ့မှာတော့ အချိန်လွန်တဲ့ထိ အပြင်မှာနေမိခဲ့ပါတယ်။ လဘုရင်ကြီးရဲ့ သမီးငယ် ၂ ယောက်ဟာ Kubo ကိုတွေ့ရှိသွားပြီး တိုက်ခိုက်ပါတော့တယ်။ ဒါပေမဲ့ မိခင် Sariatu က သူမရဲ့ မှော်ပညာနဲ့ ကာကွယ်ပေးရင်း Kubo ကို အဝေးကိုလွှတ်လိုက်ပြီး ညီမတွေနဲ့ တိုက်ခိုက်ရင်းကျန်နေခဲ့ပါတော့တယ်။ လမ်းခုလတ်မှာ သတိမေ့သွားတဲ့ Kubo ဟာ သတိပြန်ရလာချိန်မှာတော့ သူ့ကိုစောင့်ရှောက်နေတဲ့ မျောက်ဖြူမတစ်ကောင်ကို တွေ့ရပါတယ်။ မျောက်ဖြူဟာ သူ့ကိုယ်သူ မိခင်Sariatu ရဲ့မှော်အစီအရင်လို့ ပြောပြီး Sariatu ကတော့ တိုက်ပွဲမှာ ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီလို့ပြောပါတယ်။ Kubo အနေနဲ့ လဘုရင်ကြီးကိုအောင်နိုင်ချင်ရင် ဖခင် Hanzoရဲ့ ဓား၊ သံချပ်ကာဝတ်စုံ နဲ့ ဦးဆောင်းတို့ကို လိုက်လံရှာဖွေရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Kubo ရဲ့ ရှာဖွေရေး ခရီးစဉ်မှာ ပါဝင်သူတွေကတော့ မျောက်ဖြူရယ်။ သူ့ရဲ့ စက္ကူ ရုပ်လေးဖြစ်တဲ့ Hanzo အသေးစားလေးရယ် ၊ လမ်းခုလတ်မှာတွေ့ဆုံရင်းနှီးလာခဲ့တဲ့ အတိတ်မေ့နေတဲ့လူတစ်ပိုင်း ပိတုန်းတစ်ပိုင်းကောင်တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သဲကြီးမဲကြီးနောက်ယောင်ခံလိုက်နေတဲ့ လူတွေဆီကနေ ပြေးပြီး ဖခင်ရဲ့ဝတ်စုံတွေကို ရှာဖွေရတဲ့ ခရီးဟာ မလွယ်လှပါဘူး။ ရှာဖွေပြေးလွှားရင်းနဲ့ပဲ Kubo ကို အမြဲစောင့်ရှောက်နေတဲ့ မျောက်ဖြူမ ဟာ တကယ်တော့ သူ့ရဲ့ မိခင် Sariatu ရဲ့ ဝိညာဉ်ဖြစ်နေသလို ပိတုန်းတစ်ပိုင်း လူတစ်ပိုင်းကောင်ကြီးကလည်း ပုံပြောင်းခံထားရတဲ့ ဖခင် Hanzo မှန်း သိသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာပဲ မမျှော်လင့်တဲ့ လဘုရင်ကြီးရဲ့ထောင်ချောက်တွေနဲ့ မိသွားခဲ့တဲ့ Kubo တို့ရဲ့ အနာဂတ်ဟာ………………. (ဇာတ်လမ်းအဆက်ကို ကိုယ်တိုင်ကြည့်ရှုခံစားစေချင်ပါတယ်)
ဒီကားလေးဟာ Story Line ကို အသားပေးထားမှန်းသိသာပါတယ်။ Animationတော်တော်များများမှာ တွေ့ဖို့ခဲယဉ်းတဲ့ စိတ်ခံစားချက်ပိုင်းဆိုင်ရာ message လေးတွေကို တော်တော်ကြိုက်မိပါတယ်။ ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပုံက Disney တို့လောက် လက်သံမပြောင်နိုင်ပေမဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဟန်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အရည်အသွေးကိုတော့ ကောင်းကောင်းချပြနိုင်တာမို့လို့ အရမ်းသဘောကျမိပါတယ်။ အသက်ငယ်သေးတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်ရဲ့ စွန့်စားခန်းတွေဟာ ဘေးကအကူအညီတွေကြောင့်သာ ရှေ့ဆက်တိုးနိုင်ရပုံကို သဘာဝကျကျတွေ့ရလို ရန်ငြိုးတွေ အာဃာတတွေ ဆိုတာကလည်း စိတ်ထားမြင့်မြတ်သူတွေမှာ ဘယ်လိုမှမရှိနိုင်တဲ့ အရာတွေဆိုတာကို ခံစားချက်အပြည့် ပုံဖော်သွားတာမို့ ဇာတ်လမ်းပြီးခါနီးနေရာအချို့မှာဆို မျက်ရည်ဝဲတဲ့အထိကို ရင်ထဲထိမိပါတယ်။ အရောင်အသွေးပေါင်းစုံ ပုံစံပေါင်းစုံ character တွေနဲ့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးမြိုင်​မြိုင်​ဆိုင်​ဆိုင်​ စွန့်စားခန်းဖွင့်ကြတဲ့ Animated ဇာတ်လမ်းတွေကို ငြီးငွေ့နေတယ်ဆိုရင်တော့ အခု တင်ဆက်လိုက်တဲ့ “Kubo and The Two Strings”ကို ကြည့်ရှုကြပါလို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
ရုပ်ရှင်အညွှန်း - Myotaku
[FORMAT]:………………………….:[ 720p DVDRip x264, 640p x264
[FILE SIZE]:……………………….:[ 932 MB, 417 MB
[RESOLUTION]:………………….:[ 720x480, 640x380
[RELEASE RUNTIME]:………………….:[1h 41 mins
Posted by Y Junction at 12:38:00 PM
Coc Princess April 18, 2017 at 9:29 AM
Anonymous June 22, 2018 at 5:24 AM
Anonymous June 22, 2018 at 5:25 AM